‘देशको माया हुने कलाकार नेपालमै बस्नुपर्ने’ भनेपछि वर्षा फेरी तानिइन् विवादमा ! – Everest Pati
‘देशको माया हुने कलाकार नेपालमै बस्नुपर्ने’ भनेपछि वर्षा फेरी तानिइन् विवादमा !
काठमाडौं। नायिका वर्षा राउत एउटा भिडियो लाइभ अन्तरवार्तामा बोलेको विषयमा विवादमा तानिइिन् । उनका वारेमा ट्रोल बनाइएको छ । निकै आलोचना भएपछि उनले आफ्नो नेपाल प्रतिको माया अरुको भन्दा कम नभएको र आवश्यक परे कालापानी गएर म’र्न पनि तयार रहेको प्रतिकृया दिइन् । पत्रकार ऋषी धमलासंगको अन्तरवार्ताका क्रममा उनले यस्तो भनेकी थिइन् ।